ဇွန်လ 11, 2009 တွင် 4:41 နံနက်
ဘယ်မှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်?? ကိုယ့်ကိုမဆို download link ကိုရှာဖွေတယ်?
ဇွန်လ 11, 2009 တွင် 6:05 ညနေ
ဤဗားရှင်း WP နှင့်အတူဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ် 2.7.1 လွန်း.
One ကိုနည်းနည်းပေါ်အောင်တာပဲဖြစ်လိမ့်မည်, အဆိုပါ widget အတွက် transposh.org မှ link ကိုသစ်ကိုပြတင်းပေါက်၌ဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ် (ပစ်မှတ် = _blank).
ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ code တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးချင်ကြဘူး.
ဇွန်လ 17, 2009 တွင် 9:08 နံနက်
ဇွန်လ 16, 2009 တွင် 7:51 ညနေ
ငါထိန်းသိမ်းရန် site တစ်ခုပေါ်မှာဤ installed နှင့် NextGen ပြခန်းကိုဖဲ့, အဖြစ်ကောင်းစွာ, ဒါကြောင့်ငါငြိမ် home page ကိုဖန်တီးဖတ်ပါအောက်ရှိ setting ကိုလျှောက်ထားခဲ့သော်လည်းအိမ်မှာအဖြစ်ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာမှ defaulting စတင်ခဲ့သည်.
Oh, ကိုယ့် WP ကို​​တရားစွဲမယ်ပေါ့ 2.8.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. တဖန်ငါကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ကိုယ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား config ကိုအတူ, ဒါကြောင့်အကြီးအကြည့်ကြောင့်.
ဇွန်လ 17, 2009 တွင် 9:09 နံနက်
အောက်ခြေ option ကိုမှာ scripts ကို disable လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ, ဒီကဖြေရှင်းလျှင်ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့